1050-2000mAh Factory, Supplier - China 1050-2000mAh Mpanamboatra
103450 3.7V 2000mAh bateria Li-po azo havaozina ho an'ny mari-pana
Ny bateria PLM-103450 3.7V 2000mAh azo averina ampiasaina dia mampiasa fitaovana tsara indrindra misy fahaiza-manao avo lenta azon'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Li-po Battery 652480 3.8V 2000mAh Battery cell ho an'ny mpandahateny Bluetooth, kilalao, Robot elektronika, fitaovana fanamafisana ny lalàna
Ny batteran'ny PLM-652480 3.8V 2000mAh dia mampiasa fitaovana tsara indrindra miaraka amin'ny fatrany avo indrindra mety ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Ultrasonic Welding AP50 1200mah 7.4V li-ion bateria famokarana radio li-po bateria ho an'ny resaka resaka walkie mandeha amin'ny tanana
Fokatra wholesale mivantana! Ny batterie PLM-AP50 7.4V 1200mah azo ampiasaina dia mampiasa fitaovana tsara indrindra miaraka amin'ny haavo avo indrindra azo atao ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Antsipiriany momba ny vokatra: Fampiharana: Kilalao, Fitaovana ao an-trano, bateria elektronika ho an'ny mpanjifa: 10mm * 34mm * 50mm Anaran'ny marika: fanamarinana PLM: Isa maodely MSDS: PLM-103450 Toerana niaviany: Guangdong, Sina Lanjany: 2.5g / PC Karazan-bateria: azo averina averina Volavolan-tariby polimera: 3.7V Fahavitrihana: 1800mAh Ady: 12 volana Fampiasana: mpiteny bluetooth, kilalao, fitaovana mahafinaritra, Fiainana E-mask: 500-1000 Times Hizarana: 1,8A fonosana: fonosana boaty isam-batan'olona: 1.Dual MOS birao fiarovana octagonal 2.Short cir ...
Antsipiriany momba ny vokatra: Fampiharana: Kilalao, Fitaovana ao an-trano, Anaran'ny marika elektronika ho an'ny mpanjifa: fanamarinana PLM: Isa maodely MSDS: PLM-804540 Toerana niandohana: Guangdong, Sina lanja: 30g / PC Karazan-bateria: Tavy bateria polymer azo averina: 3.7V Hafa: 1100mAh Vataben'ny bateria: 8.0 * 45 * 40mm Garantiana: 12 volana Fampiasana: kilalao, mpanadio elektronika, mpiteny bluetooth fitondra aina: 500-1000Tatra Fahafahana mihena: 1.1A fonosana: fonosana boaty isam-batan'olona: Fiarovana 1.Dual MOS octagonal fiarovana .. .